Kyerɛ Obu Ma Wɔn a Yɛhyɛ Wɔn Ase? | Onyankopɔn Dɔ
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Ecuadorian Sign Language English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Guna Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kazakh Kekchi Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mixe Mizo Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nzema Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vezo Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Dɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Yɛkyerɛ Obu Ma Wɔn a Yɛhyɛ Wɔn Ase?
“Munni nnipa nyinaa ni.”—1 PETRO 2:17.
1, 2. (a) Dɛn nti na ɛyɛ den ma yɛn sɛ yɛbɛkyerɛ obu ama wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no? (b) Nsɛmmisa bɛn na yebesusuw ho?
SƐ WƆKA kyerɛ abofra sɛ ɔnyɛ biribi na ɔmpɛ sɛ ɔyɛ a, wuhu sɛnea ɔyɛ n’anim no? Wutumi hu sɛ ɔmpɛ nea wose ɔnyɛ no koraa. Ɔte nea ne papa anaa ne maame reka no, na onim nso sɛ ɛsɛ sɛ otie no. Nanso pɛ ara na ɔmpɛ sɛ ɔyɛ nea waka akyerɛ no no. Abofra yi tebea no tumi to yɛn nyinaa.
2 Ɛnyɛ bere nyinaa na ɛyɛ mmerɛw sɛ yebenya obu ama wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no. Ɛyɛ a wo nso ɛtɔ da a, ɛyɛ den ma wo sɛ wubenya obu ama wɔn a wohyɛ wɔn ase no anaa? Ɛnde ɛnyɛ wo nko ara na ɛyɛ wo saa. Nnansa yi, nnipa dodow no ara mmu wɔn mpanyimfo. Nanso Bible ka sɛ ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ obu ma wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no. (Mmebusɛm 24:21) Nokwasɛm ni, sɛ yɛbɛtena Onyankopɔn dɔ mu a, ehia sɛ yɛyɛ saa. Eyi nti ɛsɛ sɛ yesusuw nsɛmmisa bi ho. Dɛn na ɛma ɛyɛ den pii saa sɛ yebenya obu ama wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no? Adɛn nti na Yehowa pɛ sɛ yenya obu a ɛte saa, na dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛayɛ saa? Nea etwa to no, akwan bɛn na yɛbɛfa so akyerɛ obu ama wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no?
NEA ENTI A ƐYƐ DEN
3, 4. Dɛn na ɛkɔfaa bɔne ne sintɔ bae, na dɛn nti na bɔne a ɛwɔ yɛn ho no ma ɛyɛ den sɛ yebebu yɛn mpanyimfo?
3 Ma yɛnhwɛ nneɛma mmienu a enti ɛyɛ den saa sɛ yɛbɛkyerɛ obu ama wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no. Nea edi kan, bɔne wɔ yɛn ho; nea ɛto so mmienu, nnipa a yɛhyɛ wɔn ase no nso, bɔne wɔ wɔn ho. Bɔne ne sintɔ baa nnipa ho akyɛ; efi bere a Adam ne Hawa tew Onyankopɔn tumi so atua wɔ Eden turo mu no. Enti atuatew na ɛkɔfaa bɔne bae. Ɛnnɛ yi nyinaa, atuatew wɔ yɛn mu.—Genesis 2:15-17; 3:1-7; Dwom 51:5; Romafo 5:12.
4 Abɔnefo a yɛyɛ nti, ɛnyɛ den koraa sɛ yɛn mu dodow no ara bɛyɛ ahomaso ne ahantan. Nanso ahobrɛase deɛ, ɛnyɛ nnipa nyinaa na wɔwɔ bi, na ne nya nso yɛ den. Sɛ yɛde nokwaredi asom Onyankopɔn mfe pii mpo na sɛ yɛanhwɛ yiye a, yɛbɛyɛ asoɔden ne ahomaso. Ɛho nhwɛso ne Kora. Odii nokware, na ɔne Yehowa nkurɔfo faa ahokyere bebree mu. Nanso ɔperee tumidi, na wamfɛre mpo sɛ ɔbɛtew atua atia Mose, ɔbarima a saa bere no na odwo sen obiara no. (Numeri 12:3; 16:1-3) Ɔhene Usia nso yɛɛ saa ara. Ahantan nti, ɔkɔɔ Yehowa asɔrefie sɛ ɔrekɔyɛ adwuma kronkron a asɔfo nkutoo na wotumi yɛ no. (2 Beresosɛm 26:16-21) Mmarima yi nyaa nea wɔyɛe no so akatua. Ne nyinaa mu no, yɛn mu biara betumi asua biribi pa bi afi adebɔne a wɔyɛe no mu. Ɛsɛ sɛ yɛyere yɛn ho yi ahantan fi yɛn mu na yɛatumi akyerɛ obu ama yɛn mpanyimfo.
5. Ɔkwan bɛn so na nnipa a wɔtɔ sin di tumi bɔne?
5 Nnipa a wɔwɔ tumi nso ayɛ nneɛma pii ama obu a nkurɔfo wɔ ma wɔn no akɔ fam. Wɔn mu pii adi atirimɔdensɛm, na wɔadi nkurɔfo ani ahyɛ wɔn so. Ampa ara, nnipa de tumi a wɔwɔ no ahyɛ nnipa so mfe pii. (Kenkan Ɔsɛnkafo 8:9.) Ɛho nhwɛso ne Saul. Bere a Yehowa paw no sɛ ɔhene no, na ɔyɛ onipa pa, na na ɔbrɛ ne ho ase. Nanso ɔbɛyɛɛ ahantan ne ahoɔyaw; afei otuu n’ani sii ɔnokwafo Dawid so. (1 Samuel 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11) Akyiri yi, Dawid bɛyɛɛ ɔhene, na sɛ yɛka Israel ahene a na wɔbɔ mmɔden paa no a, na ɔka ho. Nanso ɔde ne tumi kɔfaa Hetini Uria yere, na ɔde ne kunu a na onnim nea ɛrekɔ so no kogyinaa akono ma wokum no. (2 Samuel 11:1-17) Nokwasɛm ne sɛ, nnipa tɔ sin, enti wɔntaa nni tumi yiye. Na sɛ nnipa a wodi tumi no nsuro Yehowa a, ɛsɛe asɛm no koraa. Britain ɔmanyɛfo bi kyerɛw sɛnea Katolek popenom dii nkurɔfo ani no ho asɛm. Owiee n’asɛm no sɛ: “Tumi ma onipa sɛe, na tumi a obi ne obiara mmɔ mu hye sɛe onipa koraa.” Bere a asɛm yi wɔ yɛn adwenem no, ma yensusuw asɛmmisa yi ho: Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yebu wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no?
DƐN NTI NA ƐSƐ SƐ YEBU WƆN A YƐHYƐ WƆN ASE?
6, 7. (a) Dɛn na ɔdɔ a yɛdɔ Yehowa no ka yɛn ma yɛyɛ, na dɛn ntia? (b) Adwene bɛn na ɛsɛ sɛ yenya wɔ ahobrɛase ho, na yɛbɛyɛ dɛn ada no adi?
6 Ɔdɔ a yɛwɔ ma Yehowa, yɛn yɔnko nnipa, ne mpo yɛn ankasa ho no ne ade titiriw a enti ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ obu ma wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no. Esiane sɛ yɛdɔ Yehowa sen biribiara nti, yɛpɛ sɛ ne koma tɔ ne yam. (Kenkan Mmebusɛm 27:11; Marko 12:29, 30.) Yenim sɛ efi bere a wɔtew atua wɔ Eden no na wɔasɔre atia Onyankopɔn tumidi wɔ asase so, na nnipa dodow no ara akogyina Satan afã na wɔapo Yehowa tumidi. Ɛyɛ yɛn anigye sɛ yɛn deɛ, yentuu saa anammɔn no bi. Sɛ yɛkenkan nsɛm dɛdɛ a ɛwɔ Adiyisɛm 4:11 no a, ɛka yɛn koma paa. Yɛn deɛ, yɛn adwene si yɛn pi koraa sɛ Yehowa na ɔfata sɛ odi amansan yi so! Yegye Yehowa tumidi tom, na yɛma ɔkyerɛ yɛn nea yɛnyɛ wɔ biribiara mu.
7 Saa a yɛbɛyɛ no hwehwɛ sɛ yɛyɛ osetie, nanso ɛnyɛ ɛno nko na ehia. Ɔdɔ a yɛdɔ Yehowa nti, yɛyɛ nea ɔka sɛ yɛnyɛ. Ne nyinaa akyi no, ɛtɔ mmere bi a, ɛyɛ den sɛ yɛbɛyɛ osetie. Sɛ ɛba saa a, na yɛakɔyɛ te sɛ abofra a yɛkaa ne ho asɛm mfiase no; ɛsɛ sɛ yesua ahobrɛase. Kae sɛ bere a ɛyɛɛ den kɛse maa Yesu sɛ ɔbɛyɛ n’Agya apɛde mpo no, ɔbrɛɛ ne ho ase yɛe. Ɔka kyerɛɛ n’Agya sɛ: “Ɛnyɛ me pɛ, na mmom ma wo pɛ nyɛ.”—Luka 22:42.
8. (a) Mpɛn pii no, dɛn na sɛ yɛyɛ a ɛbɛkyerɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase ma Yehowa tumidi nnɛ, na dɛn na ɛma yehu sɛnea Yehowa te nka wɔ ho? (b) Dɛn na ebetumi aboa yɛn ma yɛatie afotu na yɛagye nteɛso atom? (Hwɛ adaka a n’asɛmti ne “ Tie Afotu na Gye Nteɛso.”)
8 Ɛnnɛ, Yehowa nkasa nkyerɛ yɛn mmaako mmaako; mmom no, ɔnam n’Asɛm ne nnipa a wɔyɛ n’ananmusifo wɔ asase so no so. Mpɛn pii no, nea yɛyɛ a ɛbɛkyerɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase ma Yehowa tumidi ne sɛ yɛbɛkyerɛ obu ama wɔn a ɔde wɔn asisi yɛn so ne wɔn a wama kwan sɛ wonni yɛn so no. Sɛ yɛtew atua wɔ nnipa a wɔte saa so, na ɛkɔba sɛ yɛantie wɔn afotu ne wɔn nteɛso a efi Bible mu no a, na yɛreyɛ yɛn Nyankopɔn no bɔne. Bere a Israelfo nwiinwii tiaa Mose na wɔtew no so atua no, Yehowa faa no sɛ ɔno na wɔretew no so atua.—Numeri 14:26, 27.
9. Dɛn nti na ɔdɔ a yɛwɔ ma yɛn yɔnko nnipa bɛma yɛakyerɛ obu ama wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no? Kyerɛkyerɛ mu.
9 Ɔdɔ a yɛwɔ ma yɛn yɔnko nnipa ne ade foforo a enti yɛkyerɛ obu ma wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no. Dɛn ntia? Fa no sɛ woka asraafo ho rekɔ ɔko. Sɛ mubedi nkonim anaa mubenya ahobammɔ a, egyina sɛnea ɔsraani biara bɛyɛ asoɔmmerɛw ne osetie ama ne panyin na wakyerɛ obu ama no so. Sɛ wubu saa nhyehyɛe no so tew atua a, ebetumi de asraafo a wɔka wo ho no nkwa ato asiane mu. Ɛwom, ɛnnɛ, asraafo taa sɛe nneɛma pii wɔ wiase. Nanso Yehowa wɔ asraafo a wɔn deɛ, adepa nkutoo na wɔyɛ. Bible frɛ Onyankopɔn “asafo Yehowa” mpɛn pii. (1 Samuel 1:3) Ɔno ne Ɔsahene a ɔda abɔfo ahoɔdenfo ɔpepem pii ano. Ɛtɔ da bi a, Yehowa de n’asomfo a wɔwɔ asase so nso toto asraafo ho. (Dwom 68:11; Hesekiel 37:1-10) Sɛ ɛba sɛ yɛtew atua tia nnipa a Yehowa de wɔn asisi yɛn so no a, ɛrenkyerɛ sɛ yɛde yɛn nuanom Kristofo a wɔte sɛ asraafo no nkwa reto asiane mu anaa? Sɛ Kristoni tew atua tia mpanyimfo a wɔapaw wɔn no a, ɛbɛka afoforo a wɔwɔ asafo no mu nso. (1 Korintofo 12:14, 25, 26) Abofra tew atua a, ɛka abusua no nyinaa. Enti nea yɛyɛ de kyerɛ sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko nnipa ne sɛ yebenya obu ama wɔn, na yɛne wɔn ayɛ baako.
10, 11. Sɛ yɛpɛ sɛ esi yɛn yiye a, dɛn nti na ɛsɛ sɛ yetie wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no?
10 Ade foforo nso a enti yɛkyerɛ obu ma nnipa a yɛhyɛ wɔn ase ne sɛ ɛboa yɛn ankasa. Sɛ Yehowa ka sɛ yɛnkyerɛ obu mma wɔn a wɔwɔ tumi a, ɔtaa kyerɛ mfaso a ɛwɔ so sɛ yɛbɛyɛ saa. Emu bi ne sɛ, ɔka kyerɛ mmofra sɛ wɔnyɛ aso ntie wɔn awofo na ama wɔatena ase akyɛ na asi wɔn yiye. (Deuteronomium 5:16; Efesofo 6:2, 3) Ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnkyerɛ obu mma asafo mu mpanyimfo, efisɛ sɛ yɛanyɛ saa a, ɛbɛsɛe yɛne Onyankopɔn ntam. (Hebrifo 13:7, 17) Na ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛn ahobammɔ nti yentie wiase atumfoɔ.—Romafo 13:4.
11 Wunnye ntom sɛ, sɛ yehu nea enti a Yehowa pɛ sɛ yɛyɛ osetie no a, ɛbɛboa yɛn ama yɛabu yɛn mpanyimfo? Afei ma yɛnhwɛ akwan titiriw mmiɛnsa a yɛbɛfa so akyerɛ sɛ yebu wɔn a yɛhyɛ wɔn ase no.
OBU A YƐBƐKYERƐ WƆ ABUSUA MU
12. Adwuma bɛn na Yehowa de ama okunu anaa agya wɔ abusua no mu, na ɔbɛyɛ no ɔkwan bɛn so?
12 Yehowa na ɔhyehyɛɛ abusua. Esiane sɛ ɔyɛ Onyankopɔn a ɔtoto biribiara pɛpɛɛpɛ nti, wahyehyɛ abusua sɛnea nneɛma bɛkɔ yiye. (1 Korintofo 14:33) Wama okunu anaa agya no tumi sɛ ɔnyɛ abusua ti. Ɔkwan a okunu bɛfa so akyerɛ sɛ obu ne Ti a ɔne Kristo Yesu no ne sɛ obesuasua sɛnea Yesu di asafo no so no. (Efesofo 5:23) Enti okunu no rentoto n’asɛde ase, na mmom obedi ho dwuma sɛnea ɛsɛ sɛ ɔbarima yɛ. Ɔrempoopoo ne fiefo ntan wɔn ani, na mmom ɔbɛdɔ wɔn, adwen wɔn ho na wayɛ wɔn yiye. Ɔbɛkae sɛ ɔno nso hyɛ obi ase na ne tumi nnu Yehowa de ho hwee.
Ɛsɛ sɛ agya a ɔyɛ Kristoni suasua sɛnea Kristo di asafo no so no
13. Ɔkwan bɛn na ɔyere anaa ɛna bɛfa so ayɛ n’asɛde wɔ abusua mu ama Yehowa ani agye?
13 Ɔyere anaa ɛna yɛ ne kunu boafo anaa ne hokafo. Ɔno nso wɔ tumi wɔ abusua no mu efisɛ Bible ka sɛ, mpo “wo maame mmara.” (Mmebusɛm 1:8) Ɔwɔ tumi deɛ, nanso ɔhyɛ ne kunu ase. Nea ɔyere a ɔyɛ Kristoni de bɛkyerɛ sɛ obu ne kunu ne sɛ ɔbɛboa no ma wayɛ n’asɛde sɛ abusua ti. Ɔremmu no animtiaa, ɔremfa kwan bi so nni no so, na ɔrennye ne tiyɛ no nso. Mmom no, ɔne no bɛyɛ baako na waboa no. Sɛ ɔbarima no si gyinae bi na ɔbea no ani nnye ho a, obetumi de obu akyerɛ n’adwene, nanso ɔbɛbrɛ ne ho ase ama ne kunu. Sɛ ne kunu nyɛ gyidini a, ɛbɛma ayɛ den sɛ ɔbɛbrɛ ne ho ase wɔ nneɛma bi mu, nanso sɛ ɔbrɛ ne ho ase a, ebetumi ama ne kunu no ahwehwɛ Yehowa.—Kenkan 1 Petro 3:1.
14. Dɛn na mmofra bɛyɛ na ama wɔn awofo ne Yehowa ani agye?
14 Sɛ mmofra tie wɔn papa ne wɔn maame asɛm a, ɛma Yehowa ani gye. Ɛma wɔn awofo nso nya nidi ne anigye. (Mmebusɛm 10:1) Ɔbaatankoro mmusua mu nso, ɛsɛ sɛ mmofra bu ɔwofo no saa ara na wohu sɛ ɔwofo no hia wɔn mmoa kɛse, na ɛsɛ sɛ wɔne no yɛ baako. Sɛ obiara yɛ nea Onyankopɔn de ahyɛ ne nsa wɔ abusua no mu a, ɛde asomdwoe ne anigye pii ba. Ɛde nidi brɛ Yehowa Nyankopɔn a ɔhyehyɛɛ mmusua nyinaa no.—Efesofo 3:14, 15.
OBU A YƐBƐKYERƐ WƆ ASAFO NO MU
15. (a) Dɛn na yɛyɛ wɔ asafo no mu a ɛbɛkyerɛ sɛ yebu Yehowa tumidi? (b) Nnyinasosɛm bɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛabrɛ yɛn ho ase ama wɔn a wodi yɛn anim no? (Hwɛ adaka a n’asɛmti ne “ Monyɛ Osetie Mma Wɔn a Wodi Mo Anim No.”)
15 Yehowa apaw ne Ba no sɛ onni Kristofo asafo no so. (Kolosefo 1:13) Yesu nso de ahyɛ “akoa nokwafo ne ɔbadwemma” no nsa sɛ wɔnhwɛ Onyankopɔn nkurɔfo a wɔwɔ asase so no so na wɔatumi asom no yiye. (Mateo 24:45-47) “Akoa nokwafo ne ɔbadwemma” no ne Yehowa Adansefo Akwankyerɛ Kuw no. Sɛnea na ɛte wɔ Kristofo asafo no mu wɔ asomafo no bere so no, Akwankyerɛ Kuw no de akwankyerɛ ne afotu kɔma mpanyimfo a wɔwɔ hɔ nnɛ no nso. Wotumi de ma wɔn tẽẽ anaa wɔde fa ananmusifo te sɛ ahwɛfo akwantufo so. Sɛ yɛn mu biara brɛ ne ho ase ma Kristofo mpanyimfo a, na yɛretie Yehowa.—Kenkan 1 Tesalonikafo 5:12; Hebrifo 13:17.
16. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ honhom kronkron na ɛpaw asafo mu mpanyimfo?
16 Asafo mu mpanyimfo ne asomfo tɔ sin. Wɔn nso di mfomso te sɛ yɛn ara. Ne nyinaa mu no, wɔde mpanyimfo no ama sɛ ‘nnipa mu akyɛde’ sɛ wɔmmoa asafo no mma wɔnyɛ den wɔ ɔsom no mu. (Efesofo 4:8) Honhom kronkron na ɛpaw mpanyimfo no. (Asomafo Nnwuma 20:28) Ɔkwan bɛn so? Nea ɛte ne sɛ, ansa na wɔbɛpaw wɔn no, ɛsɛ sɛ wonya suban a wɔaka ho asɛm wɔ Onyankopɔn Asɛm a wɔde honhom kronkron kyerɛwee no mu. (1 Timoteo 3:1-7, 12; Tito 1:5-9) Bio nso, mpanyimfo a wɔhwɛ paw anuanom a wɔfata no bɔ mpae hwehwɛ Yehowa honhom kronkron akwankyerɛ.
17. Sɛ ɛtɔ mmere bi na Kristofo mmea reyɛ asafo no mu dwumadi bi a, dɛn nti na wɔkata wɔn ti?
17 Asafo no mu no, edu mmere bi a mpanyimfo ne asomfo nni hɔ a wɔbɛyɛ nnwuma bi a wɔn na ɛsɛ sɛ wɔyɛ no. Ebi ne asɛnka nhyiam a wɔbɛhwɛ so. Sɛ ɛba saa a, ɔbarima foforo a wabɔ asu betumi ahwɛ so. Sɛ ɔbarima a ɔte saa nni hɔ a, ɛnde Kristofo mmea a wɔfata betumi adi saa dwuma no. Nanso sɛ ɔbea reyɛ adwuma a ɛsɛ sɛ ɔbarima a wabɔ asu yɛ a, ɛsɛ sɛ ɔkata ne ti. * (1 Korintofo 11:3-10) Eyi nkyerɛ sɛ wobu mmea animtiaa. Mmom no, ɛma wonya hokwan kyerɛ obu ma Yehowa tiyɛ nhyehyɛe no wɔ abusua ne asafo no mu.
OBU A YEBENYA AMA WIASE ATUMFOƆ
18, 19. (a) Wobɛkyerɛ nnyinasosɛm a ɛwɔ Romafo 13:1-7 no mu sɛn? (b) Yɛbɛyɛ dɛn akyerɛ sɛ yebu wiase atumfoɔ?
18 Nokware Kristofo bɔ mmɔden paa de nnyinasosɛm a ɛwɔ Romafo 13:1-7 (kenkan) no yɛ adwuma. Sɛ wokenkan hɔ a, wubehu sɛ “atumfoɔ a wɔkorɔn no” yɛ wiase atumfoɔ. Bere tenten a Yehowa ma wɔn kwan ma wodi tumi no, wɔyɛ nnwuma bi a ɛho hia. Wɔhwɛ ma mmara yɛ adwuma, na wɔma yenya nneɛma bi a yehia. Sɛ yedi mmara so a, ɛkyerɛ sɛ yebu atumfoɔ yi. Enti yɛhwɛ tua yɛn tow nyinaa, na yɛhyehyɛ yɛn nkrataa nyinaa pɛpɛɛpɛ sɛnea aban mmara te. Sɛ wɔhyɛ mmara bi na sɛ ɛka yɛne yɛn abusua, yɛn adwuma ne yɛn agyapade a, yedi so. Nanso sɛ wiase atumfoɔ no ka sɛ ɛnsɛ sɛ yedi Onyankopɔn mmara so de a, yɛrentie wɔn. Mmom no, yɛbɛka nea tete asomafo no kae no bi sɛ: “Ɛsɛ sɛ yetie Onyankopɔn sɛ sodifo mmom sen nnipa.”—Asomafo Nnwuma 5:28, 29; hwɛ adaka a n’asɛmti ne, “ Hena na Ɛsɛ sɛ Mitie No?”
HENA NA ƐSƐ SƐ MITIE NO?
Nnyinasosɛm: “Yehowa ne yɛn Temmufo, Yehowa ne yɛn Mmarahyɛfo, Yehowa ne yɛn Hene.”—Yesaia 33:22.
Sɛ wɔka sɛ menyɛ biribi a etia Yehowa mmara a, dɛn na mɛyɛ?—Mateo 22:37-39; 26:52; Yohane 18:36.
Sɛ wɔka sɛ mma minnni Yehowa ahyɛde so a, mɛyɛ dɛn?—Asomafo Nnwuma 5:27-29; Hebrifo 10:24, 25.
Dɛn na ɛbɛboa me ama matie wɔn a mehyɛ wɔn ase no?—Romafo 13:1-4; 1 Korintofo 11:3; Efesofo 6:1-3.
19 Ɔkwan foforo a yɛnam so kyerɛ obu ma wiase atumfoɔ ne sɛnea yɛne nkurɔfo di. Ɛtɔ mmere bi a yɛne aban mpanyimfo di nkitaho tẽẽ. Ɔsomafo Paulo ne atumfoɔ bi te sɛ Ɔhene Herode Agripa ne Amrado Festo hyiae. Ná wonni suban koraa, nanso Paulo ne wɔn kasae obu so. (Asomafo Nnwuma 26:2, 25) Sɛ yɛne aban mpanyimfo na ɛredi oo, yɛne polisifo oo, ɛsɛ sɛ yesuasua nea Paulo yɛe no. Kristofo mmofra a wɔkɔ sukuu nso bɔ mmɔden sɛ wɔbɛkyerɛ obu ama wɔn akyerɛkyerɛfo ne sukuu mpanyimfo ne adwumayɛfo a wɔwɔ sukuu mu hɔ. Asɛm no ne sɛ, ɛnyɛ wɔn a wɔwɔ yɛn som ho adwempa nko na yebu wɔn; yebu wɔn a wɔtan Yehowa Adansefo nso. Ampa ara, ɛsɛ sɛ yɛma wɔn a wɔnyɛ gyidifo nyinaa hu sɛ yebu ade.—Kenkan Romafo 12:17, 18; 1 Petro 3:15.
20, 21. Sɛ yɛkyerɛ obu a ɛfata ma wɔn a yɛhyɛ wɔn ase a, nhyira bɛn na yebenya?
20 Mommma yemmmu ebinom na yennya afoforo. Ɔsomafo Petro kyerɛwee sɛ: “Munni nnipa nyinaa ni.” (1 Petro 2:17) Sɛ nkurɔfo hu sɛ yebu wɔn paa a, ɛbɛma wɔn ani agye yɛn ho yiye. Kae sɛ nnipa a wobu ade nnɔɔso nnɛ. Enti obu yɛ ɔkwan baako a yɛfa so tie Yesu ahyɛde yi: “Momma mo kanea nhyerɛn nnipa anim, na wɔahu mo nnwuma pa na wɔahyɛ mo Agya a ɔwɔ soro no anuonyam.”—Mateo 5:16.
21 Nnipa a wɔwɔ koma pa reba honhom mu hann ho wɔ wiase a aduru sum yi mu. Enti sɛ yɛkyerɛ obu wɔ abusua no ne asafo no mu, na yebu wiase atumfoɔ a, ebetumi atwetwe ebinom aba hann no ho na wɔne yɛn anantew mu. Sɛ ɛba saa a, hwɛ anigye ara a ɛbɛyɛ! Na sɛ amma saa mpo a, yegye di paa sɛ obu a yɛkyerɛ ma nnipa no ma Yehowa Nyankopɔn ani gye, na ɛboa yɛn ma yɛtena Onyankopɔn dɔ mu. Nhyira bɛn na ɛkyɛn eyi?
^ nky. 17 Nkekaho a n’asɛmti ne “Bere Bɛn na Ɔbea Kata Ne Ti, na Dɛn Ntia?” no ma yehu akwan bi a yɛbɛfa so de nnyinasosɛm yi ayɛ adwuma.
“TIE AFOTU NA GYE NTEƐSO”
Satan su bi te sɛ atuatew ne ntɔkwapɛ ahyɛ nnɛ wiase no mu ma. Enti, Bible frɛ Satan “mframa a ɛrebɔ no panyin,” na ɛka nea ɔde aba no ho asɛm sɛ “honhom a seesei ɛyɛ adwuma wɔ asoɔden mma mu.” (Efesofo 2:2) Ɛnnɛ, nnipa pii mpɛ koraa sɛ wɔbɛbrɛ wɔn ho ase ahyɛ afoforo ase. Awerɛhosɛm ne sɛ, Kristofo asafo no mufo binom mpo anya atuatew su yi bi. Ɛho nhwɛso ne sɛ, asafo mu ɔpanyin bi betumi ayi ne yam de anigyede a ɔbrasɛe anaa awudisɛm wom ho afotu ama ebinom, nanso ebia wɔrentie, anaa wɔbɛkasa atia mpo. Ehia sɛ yɛn mu biara tie asɛm a ɛwɔ Mmebusɛm 19:20 yi: “Tie afotu na gye nteɛso, na woahu nyansa daakye.”
Dɛn na ɛbɛboa yɛn ama yɛatumi ayɛ saa? Nneɛma mmiɛnsa na nkurɔfo taa ka de kyerɛ nea enti a wontie afotu anaa nteɛso. Ma yɛnhwɛ saa nsɛm no ne nea Kyerɛwnsɛm no ka wɔ ho.
“Misusuw sɛ afotu no mfata.” Ebia yɛbɛte nka sɛ afotu no mfa yɛn ho papa anaasɛ onii a ɔretu fo no anhu asɛm no nyinaa ani so. Anhwɛ a nea ɛbɛba yɛn adwenem ara ne sɛ yɛremfa afotu no asɛnhia mpo. (Hebrifo 12:5) Esiane sɛ bɔne wɔ yɛn nyinaa ho nti, wunnye nni sɛ ebia yɛn na ɛsɛ sɛ yɛsesa yɛn adwene wɔ asɛm no ho? (Mmebusɛm 19:3) Enti adepa biara nni afotu a ɔde mae no mu? Na sɛ adepa bi wom a, ɛnde ɛno mmom na ɛsɛ sɛ yɛde yɛn adwene si so. Onyankopɔn Asɛm tu yɛn fo sɛ: “So nteɛso mu; nnyae mu. Kora so, na ɛne wo nkwa.”—Mmebusɛm 4:13.
“Ɔkwan a ɔfaa so tuu me fo no, m’ani annye ho.” Ampa, Onyankopɔn Asɛm kyerɛ yɛn ɔkwampa a ɛsɛ sɛ yɛfa so tu fo. (Galatifo 6:1) Nanso Bible ka bio sɛ: ‘Yɛn nyinaa ayɛ bɔne na yennu Onyankopɔn anuonyam ho.’ (Romafo 3:23) Onipa a bɔne nni ne ho nkutoo na obetumi atu yɛn fo wɔ ɔkwan bi so a asɛm biara nni ho. (Yakobo 3:2) Yehowa nam nnipa a wɔnyɛ pɛ so na etu yɛn fo, enti mfa w’adwene nsi ɔkwan a wɔfa so tu fo no so. Mmom no, susuw aba a ɛwom no ho, na fa mpaebɔ dwinnwen ho hwɛ sɛnea wode bɛbɔ wo bra.
“Ɔno ne hena a ɔrebetu me fo?” Sɛ yɛte nka sɛ mfomso a ofotufo no di nti n’afotu mfata a, ɛsɛ sɛ yɛkae nsɛm a yɛadi kan abobɔ so no. Na sɛ yɛn adwene nso yɛ yɛn sɛ mfe a yɛadi, osuahu a yɛwɔ, anaa asɛyɛde a yɛwɔ wɔ asafo no mu nti, yenhia afotu a, ɛnde na ɛsɛ sɛ yɛyɛ yɛn adwene yiye. Tete Israel no, na ahemfo wɔ tumi paa, nanso na ehia sɛ wotie afotu a adiyifo, asɔfo, ne afoforo a wɔhyɛ wɔn ase de ma wɔn no. (2 Samuel 12:1-13; 2 Beresosɛm 26:16-20) Ɛnnɛ, Yehowa ahyehyɛde no nam mmarima a bɔne wɔ wɔn ho so na etu fo, na Kristofo a wɔn ho akokwaw de ahobrɛase tie wɔn afotu no na wɔde yɛ adwuma. Sɛ yɛwɔ dibea anaa osuahu sen afoforo a, ɛsɛ sɛ ɛno mpo ka yɛn ma yɛda ntease adi na afei yɛbrɛ yɛn ho ase tie afotu, na yɛde yɛ adwuma ma ɛyɛ nhwɛso ma afoforo.—1 Timoteo 3:2, 3; Tito 3:2.
Ɛda adi pefee sɛ yɛn mu biara nni hɔ a watra afotu. Enti momma yensi yɛn bo sɛ yebetie afotu ntɛm, abrɛ yɛn ho ase de ayɛ adwuma, na yɛde anisɔ ada Yehowa ase wɔ n’akyɛde a ɛma nkwa yi ho. Nokwarem no, afotu a yenya no kyerɛ sɛ Yehowa dɔ yɛn, na yɛpɛ sɛ yɛtena Onyankopɔn dɔ mu.—Hebrifo 12:6-11.
“MONYƐ OSETIE MMA WƆN A WODI MO ANIM NO”
Ɛho behiae kɛse sɛ wɔtoto nneɛma yiye wɔ tete Israel. Bere a Mose ne nnipa ɔpepem pii retu kwan wɔ sare a ɛso yɛ hu so no, na ne nkutoo ntumi nhwɛ wɔn so. Enti dɛn na ɔyɛe? “Mose paw Israelfo no mu mmarima a wɔfata yɛɛ wɔn mpanyimfo wɔ nnipa apem biara so, ɔha biara so, aduonum biara so, ne edu biara so.”—Exodus 18:25.
Ɛnnɛ nso, ɛho abehia sɛ wɔtoto nneɛma yiye saa ara wɔ Kristofo asafo no mu. Ɛno nti asɛnka kuw biara wɔ nea ɔhwɛ so, asafo biara wɔ mpanyimfo, asafo ahorow wɔ ɔmansin sohwɛfo, na ɔman biara wɔ Ɔman Boayikuw anaa Baa Boayikuw. Nhyehyɛe yi nti, ɔbarima biara a ɔresom sɛ ɔhwɛfo no tumi de n’adwene si Yehowa nguan a ɔrehwɛ wɔn so no so yiye. Ahwɛfo yi bebu akontaa akyerɛ Yehowa ne Kristo.—Asomafo Nnwuma 20:28.
Nhyehyɛe yi a ɛwɔ asafo no mu nti, ehia sɛ yɛn mu biara yɛ osetie na ɔbrɛ ne ho ase. Ɛnsɛ sɛ yɛyɛ te sɛ Diotrefe a na onni obu biara mma wɔn a wodi asafo no anim wɔ ne bere so no. (3 Yohane 9, 10) Mmom no, ɛsɛ sɛ yetie nsɛm a ɔsomafo Paulo kyerɛwee yi: “Monyɛ osetie mma wɔn a wodi mo anim no na mommrɛ mo ho ase mma wɔn, efisɛ wɔn na wɔhwɛ mo kra so sɛ nnipa a wobebu akontaa; ɛno bɛma wɔde anigye ayɛ eyi, na ɛnyɛ ahomegu, anyɛ saa a ɛrensi mo yiye.” (Hebrifo 13:17) Sɛ wɔn a wodi anim no ma yɛn akwankyerɛ a, ebinom tie bere a wɔn ani gye ho, na sɛ wɔn ani nnye akwankyerɛ no ho anaa wonhu nea enti a wɔde rema a, wontie. Nanso momma yɛnkae sɛ nea ahobrɛase kyerɛ bio ne sɛ yɛbɛyɛ osetie bere a yɛmpɛ sɛ yɛyɛ nea wɔka kyerɛ yɛn mpo no. Enti ɛsɛ sɛ yɛn mu biara bisa ne ho sɛ, ‘So meyɛ osetie na mebrɛ me ho ase ma wɔn a mehyɛ wɔn ase no?’
Nokwarem no, nhyehyɛe a ɛsɛ sɛ yɛyɛ na ama asafo no akɔ so pɛpɛɛpɛ no, ɛnyɛ ne nyinaa na Onyankopɔn Asɛm ka ho asɛm. Nanso Bible ka sɛ: “Momma biribiara nkɔ so fɛfɛɛfɛ a nhyehyɛe da ho.” (1 Korintofo 14:40) Akwankyerɛ Kuw no tie afotu yi ma enti wɔde nhyehyɛe ne akwankyerɛ a mfaso wɔ so ma sɛnea ɛbɛyɛ a biribiara bɛkɔ so wɔano wɔano wɔ asafo no mu. Kristofo mmarima a wɔde asɛyɛde ahyehyɛ wɔn nsa no yɛ wɔn fam de, na wɔde nhyehyɛe a ɛte saa yɛ adwuma de yɛ osetie ho nhwɛso. Wɔyɛ saa nso de kyerɛ sɛ ‘wɔwɔ ntease, na wɔn aso yɛ mmerɛw’ ma wɔn a wodi yɛn anim no. (Yakobo 3:17) Enti kuw, asafo, ɔmansin, ne ɔman biara nya nhyira, efisɛ gyidifo yɛ nneɛma pɛpɛɛpɛ de suasua anigye Nyankopɔn no.—1 Korintofo 14:33; 1 Timoteo 1:11.
Paulo nsɛm a ɛwɔ Hebrifo 13:17 no nso kyerɛ nea enti a asoɔden nye. Ebetumi ama wɔn a wɔde asɛyɛde ahyehyɛ wɔn nsa no de “ahomegu” ayɛ wɔn adwuma no. Sɛ ɛba sɛ yɛantie ahwɛfo no na yɛtew atua a, hokwan a wɔanya de resom Yehowa ne ne nguan no betumi ayɛ sɛ adesoa bi. Sɛ ɛba saa a, ɛrensi “mo” yiye, kyerɛ sɛ, ɛrensi asafo no nyinaa yiye. Nokwarem no, sɛ obi ammrɛ ne ho ase anhyɛ akwankyerɛ a Onyankopɔn de ma ase a, ɛde ɔhaw foforo ba. Sɛ obi yɛ ahantan ma enti ɛyɛ den sɛ obetie akwankyerɛ a, ɛsɛe ɔne Yehowa ntam ma ɔne ne soro Agya no ntam tetew. (Dwom 138:6) Enti, momma yɛn nyinaa nsi yɛn bo sɛ yɛbɛkɔ so ayɛ osetie na yɛabrɛ yɛn ho ase.
Honhom kronkron apaw asafo mu mpanyimfo sɛ wɔnhwɛ Onyankopɔn asafo so. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ nguan no tie wɔn?